कसरी शिप गर्ने सीबीडी हेम्प फूल इन्टर्सेट शिपिंग कानून कानून जानकारी
शिपिंग कानूनी रुपमा
हेम्प शिपिंग मद्दत चाहनुहुन्छ
तपाईं CBD तेल पठाउन सक्नुहुन्छ?
शिपिंग सीबीडी हेम्प फ्लावर कानूनी छ
२०१ Farm फार्म बिलले यो प्रदान गर्न धेरै हदसम्म गएको छ कि जब एक राज्यले आफ्नै भान खेती कार्यको लागि कडा आवश्यकताहरू सिर्जना गर्न सक्दछ, एक लाइसेंस प्राप्त हम्पु किसानले कानूनी रूपमा उब्जाउने हेम्पको अन्तरराज्यीय वाणिज्य स्थानीय अधिकारीहरूले रोक्न सक्दैन। यस अवधारणाको नवीनता अझै पर्याप्त अभियोग लाग्न सकेको छैन र धेरै न्यायक्षेत्रले हेम्प फूललाई ​​निषेध गर्ने कोसिस गरेको छ। हामीले किसानहरूलाई पहिले यस्तो प्रतिबन्ध उल्टाउन सहयोग गरेका छौं।
म कसरी मेरो कम्पनीको सीबीडी हेम्प फ्लावर अन्तरराज्यीय पोत पठाउने?
२०१ Farm फार्म बिल स्पष्ट रूपमा भैँसीको अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीको लागि प्रदान गर्दछ, तर यसको मतलब यो होइन कि राज्य कानून प्रवर्तनले तपाईंको भांगको भार बीचको भिन्नतालाई सराहना गर्दछ जुन ०.।% THC भन्दा बढी छ। मानिसहरू अझै छन् हेम्प फूल ढुवानी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्दै र कानूनी रूपमा आसुत।
हेम्प फूल कसरी पठाउन
यी पाँच पोइन्टहरू तपाईंको सूचीमा हेम्प ईन्टरस्याट शिपिंगका लागि राख्नुहोस्।
कानून प्रवर्तन गर्न पत्र (सूचना)।
ड्रग कुकुरहरूले भांगबाट गाँजा भन्न सक्दैन
COA ले यसको भान प्रमाणित गर्दछ
यसका लागि लाइसेन्स र दर्ता
स्मार्ट र सुरक्षित ड्राइभ गर्नुहोस्।
हामी छलफल गर्नेछौं शिपिंग हेम्प माथिको बिन्दुहरु लाई सुरक्षित रुपमा कभर गर्नुहोस्, जुन भिडियोमा पनि छन्। शुभकामना तपाईंको कम्पनी यसको भांग लदानको साथ। परामर्श लिनुहोस् भांग वकील यातायात जोखिमबाट यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तपाईंको व्यवसायको बारेमा।
तपाईंको कम्पनीको सीबीडी हेम्प शिपिंग सावधानीपूर्वक योजना बनाउनुहोस्
2019 मा, हेम्प संघीय कानूनी छ तर कुनै नियमन बिना। हेम्प खेती र प्रशोधनको लागि या त अघिल्लो हेम्प पायलट प्रोग्रामबाट संघीय नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ, वा अर्को राज्य कानूनले भांगको खेती अधिकृत गर्दछ। युएसडीएसँग यसको अन्तिम हेम्प नियमहरू जारी गर्न २०२० सम्म छ। हेम्प कमोडिटी बजार पूर्ण रूपले परिपक्व भएको छैन।
२०१ growing को बढ्दो मौसम संयुक्त राज्यको दशकहरूमा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। भिंग लदान आउँनेछ, र कानून प्रवर्तनले अवैध बासनाको लागि बालीलाई भ्रमित गर्न सक्छ। यहाँ छ कि तपाईको हेम्प तपाईको गन्तव्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ।
हेम्पलाई शिप गर्ने योजना छ
एक योजना, वा एक कम्पनी प्रक्रिया कल गर्नुहोस्, हेम्प शिपिंग धान खेल्ने अन्नजस्तो छैन किनकि पुलिसले विगत years० बर्षदेखि अनाज बोक्ने तानिरहेको छैन।
तपाईको योजनामा ​​हेम्प शिपमेन्टको यातायातका लागि प्रक्रियाहरू र एउटा प्याकेजले लेनदेनको वैधानिकता समावेश गर्नुपर्दछ। कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु लाई एक पत्र नयाँ कानून को रूप मा केहि स्पष्टता प्रदान गर्न र तिनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ।
भेष ढुवानी कानून प्रवर्तन को लागी सूचना
एक पत्र, वा सूचना, कानून प्रवर्तन गर्न को लागी तपाइँको भँप ढुवानी पक्राउ छ यदि तपाइँको कम्पनी के गरिरहेको छ के सही कानूनी छ भनेर देखाउन मद्दत गर्दछ।
कानून प्रवर्तन को लागी एक राम्रो पत्र हुनेछ:
हेम्प सम्बन्धी संघीय कानून उल्लेख गर्नुहोस्
अन्तरराज्यीय हेम्प शिपिंगको सन्दर्भमा संघीय कानून उल्लेख गर्नुहोस्
उद्धृत राज्य कानून तपाइँको कम्पनी को कार्य आधिकारिक
विश्लेषणको हेम्पको प्रमाणपत्रहरू दिनुहोस् (COA)
बुझाउनुहोस् ड्रग कुकुरहरु झूटा सकारात्मक सचेत छ किनकि hemp मा terpenes को कारण
तपाईंको वकील को लागी सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।
ड्रग कुकुरहरूले हेम्प शिपमेन्टसँग काम गर्दैन
क्यानाबिसलाई गैरकानुनी गाँजा बनाउने केमिकल डेल्टा-9 THC भनिने भांग हो, वा कहिलेकाहिं केवल THC मा छोटो हुन्छ। कुकुरहरूले यस रसायनको लागि गन्ध लिन सक्दैन किनकि यो गन्ध रहित छ। यसको सट्टा, लागू पदार्थ कुकुरहरूलाई भांगको बोटमा केहि टेर्पेनोइडको गन्ध लिन प्रशिक्षण दिइन्छ। यी टेर्पेनोइडहरू या त हेम्प वा मारिजुआनामा सामान्य हुन्छन्। यहाँ सबैभन्दा छ साधारण टर्पेनेस हम्पमा फेला पर्‍यो।
ती टर्पेनेस हिप, वा मारिजुआनाको गन्ध र स्वादहरू किन यति विविधता राख्दछन्। ड्रग कुकुरहरु मात्र एक जोडी terpenes को लागी गन्ध। ड्रग कुकुरहरूले बीटा-क्यारियोफिलिनको लागि गन्ध लिन्छ। विशेष गरी, क्यारीफिलिन अक्साइडको लागि ड्रग कुकुरहरूले गन्ध लिन्छन्, जो भांग सुकाउने उपज उत्पादन हो, किनकि क्यारियोफिलिन सबैभन्दा सामान्य टेर्पेनोइड हो।
ड्रिन कुकुरहरूले पनि पिन्ने, वा यसको अक्साइडको लागि गन्ध लिन्छन्, किनकि क्यानाबिसमा सामान्य पिन्ने छ र क्यारियोफिलिनसँग मिल्दा परिणाम प्रायः भांग हुन्छ - तर भांगमा पनि भांग पनि समावेश हुन्छ।
हेम्प फ्लावर वा उत्पाद ढुवानीसँग विश्लेषणका प्रमाणपत्रहरू छन्
विश्लेषणको एक प्रमाणपत्र (सीओए) परीक्षण गरिएको हेम्पको सामग्रीको रूपमा टेस्टिंग सुविधाद्वारा गरिएको वाचा हो। राज्यहरूले प्राय: परीक्षण सुविधाहरूलाई अनुमोदन गरेका छन् जसले औद्योगिक भांगको परीक्षण ह्यान्डल गर्दछ ताकि सरकारले थप कर्मचारीहरू राख्नु पर्दैन।
यी परीक्षण कम्पनीहरूले तपाईंको भांग विश्लेषण गर्दछ, या त हेम्प वा मारिजुआना, र यसमा के छ त्यस बारे सीओए प्रदान गर्दछ। को सम्पूर्ण रासायनिक प्रोफाइल भांगको बोट सीओएमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ, तर यहाँ समावेश गर्न आवश्यक मुख्य बुँदाहरू:
कम्पनीले प्रयोगशाला परीक्षण गर्‍यो
प्रयोगशाला कृषकबाट तेस्रो पार्टी कम्पनी हो
भांगको cannabinoid प्रोफाइल
terpene प्रोफाइल (बोनस अंक)
उचित हेम्प शिपिंगलाई स्वतन्त्र तेस्रो पार्टी सीओए हेम्प शिपमेन्टको साथ आवाश्यक हुन्छ। कानून प्रवर्तन को पत्र मा पनि COA एक प्रदर्शन को रूप मा शामिल गर्नु पर्छ थप शिक्षा र कुनै भ्रमको समाधान गर्न को लागी तपाइँको हेम्प शिपिंग सम्भावित को संभावना कम गर्न ..
तपाईंको भांग शिपिंग मार्ग योजना गर्नुहोस्
यो भिडियोको स्रोत हो जुन तपाईंलाई रंगमा मानचित्र दिन्छ कि राज्यले हेम्पलाई के अनुमति दिन्छ र के चाहँदैन भनेर हेर्नको लागि।
हेम्प शिपिंग नक्शा यहाँ छ.
याद गर्नुहोस्, धेरै पक्राउहरू केवल इडाहो, वा आयोवा, वा नन्-हेम्प राज्यमा हुँदैन। राज्यहरूले पनि कानुनी हेम्प कानून कानून प्रवर्तन भ्रमित र अनुचित गिरफ्तारी को परिणाम हुनेछ। सबै अधिक कारण योजना को लागी, तपाईंको यातायात फाइल कागज, र पनि ..
शिपिंग हेम्प जोखिम मुक्त छैन
ड्राइभ स्मार्ट र सेफ जब शिपिंग हिम्प
यो भन्दै बिना गयो, तर यो अझै भने भइरहेको छ। सहि ड्राइभर छ। सबै पालो संकेत र टेल लाइटको लागि जाँच गर्नुहोस्। मा खींचने को कुनै पनि अनावश्यक संभावना बाट बच्नुहोस् - वा एक दुर्घटना मा प्राप्त। पाठ र ड्राइभ नगर्नुहोस्। पिउन र ड्राइभ नगर्नुहोस्। म्याद सकिएको लाइसेन्समा ड्राइभ नगर्नुहोस् ... र यस्तै। हेम्प शिपिंग हुँदा स्मार्ट हुनुहोस्।
भाग्यले तपाईको नयाँ हेम्प बाली उब्जाउछ।
र कल गर्नुहोस् यदि तपाईं हाम्रो भेंडा उद्यम मा हाम्रो वकिल संग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ। धन्यवाद र यो साझा गर्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् यदि तपाईबाट यसको मान भयो भने।